Isikrini esisebenza njalo se-iPhone 13 sizoba yi-ace up your sleeve | Izindaba ze-IPhone
ULuis Padilla | 20/07/2021 12:00 | iPhone 13, Izaziso
Ukumenyezelwa kwe-iPhone 13 kuyasondela, futhi yize kuzoba nezinye izindaba ezibalulekile, Okuthile okushiwo okuncane njengesikrini esihlala njalo kungaba yimpahla yakho enhle kakhulu.
Isikhathi lapho sizobona khona i-iPhone 13 sisondela, mhlawumbe kuyo le nyanga efanayo kaSepthemba, ezinyangeni ezimbili nje kusukela namhlanje. Kuningi osekushiwo ngamanoveli alo, njenge okuhamba phambili kwikhamera, wamukelekile njalo, nesikrini sayo esisha se-True Motion esine-120Hz, njengaleyo i-iPad Pro esivele inayo ezizukulwaneni eziningana. Kodwa-ke, kukhona okuthile okuncane okushiwoyo ngakho: isikrini esihlala sikhona. Kube nguMark Gurman olethe lesi sici esisha phambili, yize kube namahemuhemu ngalokhu kusebenza ezizukulwaneni eziningana, futhi okuthile okubonakala kungabalulekile kungasho ushintsho olukhulu ku-iPhone.
I-Apple Watch bekuyidivayisi yokuqala ye-Apple ukuba nesikrini esihlala sikhona, esithi "Kuhlala Kuboniswa", kusukela ku-Series 5. Ngeqe leso sizukulwane se-Apple Watch, kepha ngawa ne-Series 6, ebandakanya nalokhu kusebenza. Abanye abasebenzisi bayayivimba ngoba kusho ukusetshenziswa kwebhethri eliphakeme, kepha iqiniso ukuthi uma usujwayele, kunzima ukuyeka lokho ekunikeza kona. Yebo, ibhethri liyaphela ngokushesha, kepha i-Apple isebenzise lokhu kusebenza ukuze umthelela ube phansi ngangokunokwenzeka, futhi kuncane kakhulu uma usebenzisa imikhakha lapho umbala omnyama ubonakala khona, ngoba zonke izingxenye ezimnyama zesikrini izocishwa. Ubuchwepheshe kulindeleke ukuthi bufane kakhulu ku-iPhone 13.
Ewashini ikuvumela ukuthi ubone isikhathi ngaphandle kokuthi uvule isihlakala sakho, kepha ku-iPhone lokhu kusebenza kungaqhubeka kakhulu, futhi uma i-Apple ikungeza kumodeli entsha ye-iPhone, kufanele isisebenzise ngokugcwele. Kusho ukuthini lokhu? Ngeke kube khona iphuzu kusikrini esivala njalo lapho konke esikubonayo kuyisikhathi, nokuyinto eyenzekayo ngalo mzuzu lapho kusebenze isikrini. Uma manje sinesikrini esihlala sikhona, sizokwazi ukubona imininingwane eminingi, njengenombolo yezaziso esinazo, futhi kungani kungenjalo isimo sezulu endaweni yethu, noma ukuqokwa kwekhalenda okuzayo. Okusho ukuthi, uma isikrini esihlala njalo sifika, kufanele sifike noshintsho ekwakhiweni kwesikrini sokukhiya, futhi leyo yinto ebesikade siyilinde isikhathi eside.
Sivele siyayazi i-iOS 15, kepha i-Apple ihlale ine-ace sleeve yayo nge-smartphone yayo entsha, futhi ngiyaqiniseka ukuthi sizobona izindaba ze-iOS 15 esingakhonjiswanga kuzethulo zokugcina ze-Keynote ngoba kuzofanele silinde I-iPhone 15 ikhishwa, njengoba kuzoba izinguquko ezikhethekile zale smartphone. Kulabo bethu abazoshintshela kumodeli entsha ye-iPhone lezi izindaba ezinhle, hhayi kakhulu kulabo abahlela ukuhlala nemodeli yabo yamanje.. Futhi uma isikrini esivuliwe njalo sifakiwe ku-iPhone 13, kufanele silinde ukukhiya okusha, ekugcineni.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Ama-terminals we-IPhone » iPhone 13 » Isikrini esisebenza njalo se-iPhone 13 sizoba yi-ace up sleeve sayo